Excel ayaa laga helay Mawduuc aan la akhrin karin
Bogga ugu weyn Products DataNumen Excel Repair Excel waxay ka heshay waxyaabo aan la aqrin karin "filename.xslx".
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan "Excel La Helay Waxyaabaha aan La Akhrin karin" Khalad
Markaad furanayso faylka 'Excel XLSX' ee xumaaday ama musuqmaasuqay Microsoft Excel, waxaad arkaysaa farriinta qalad ee soo socda:
Excel ayaa ka helay waxyaabo aan la aqrin karin. Ma rabtaa inaad soo ceshato waxyaabaha ku jira buugan shaqeynta? Haddii aad ku kalsoon tahay isha buuggan shaqo, dhagsii Haa.
halkaas oo filename.xlsx uu yahay magaca faylka Excel ee musuqmaasuqay ama dhaawacmay.
Haddii aad doorato "Haa", markaa Excel wuxuu isku dayi doonaa inuu hagaajiyo faylka Excel ee musuqmaasuqa ah. Waxaa jira laba xaaladood, sida hoos ku xusan:
1. Excel ma hagaajin karto feylka.
Xaaladdaas, waxay soo bandhigi doontaa farriinta khaladka soo socda:
Excel ma furi karo faylka 'filename.xlsx' maxaa yeelay qaabka feylka ama kordhinta faylka ma ansaxsana. Xaqiiji in feylku uusan kharribmin iyo in fidinta feylku ay u dhigantaa qaabka feylka.
Hoos waxaa ku yaal shaashadda farriinta qaladka:
2. Excel way hagaajin kartaa feylka.
Xaaladdaas, waxay soo bandhigi doontaa farriinta soo socota:
Excel waxay awood u yeelatay inay furato feylka iyagoo dayactiraya ama ka saaraaya waxyaabaha aan la aqrin karin.
iyadoo waxyaabaha ku jira la dayactirayo ama laga saarayo halka hoose ee fariinta.
Hoos waxaa ku yaal shaashadda shaashadda ee farriinta:
Ka dib markaad gujiso badhanka "Close", Excel wuxuu furi doonaa faylka go'an. Waxaa jira laba xaaladood:
Xogta qaar ayaa laga soo kabsaday faylka go'an, laakiin xog badan ayaa ah lost ka dib habka dayactirka / soo kabashada.
Ma jiro xog dhab ah oo ku jirta faylka go'an ka dib nidaamka dayactirka / soo kabashada.
Markaad fureyso faylka 'Excel XLS' ee xumaaday ama musuqmaasuqay Microsoft Excel, waxaad sidoo kale arki doontaa farriinta qaladka la midka ah:
Dukumiintiga waa musuqmaasuq oo lama furi karo. Si aad isugu daydo oo aad u dayactirto, u isticmaal amarka Furan iyo Dayactirka sanduuqa wadahadalka Furan, doorona Extract Data markii laguu soo jeediyo.
Haddii aad dooratid "OK", markaa Excel wuxuu isku dayi doonaa inuu hagaajiyo feylka Excel ee musuqmaasuqa ah wuxuuna muujiyaa farriinta soo socota:
Khaladaadka waxaa lagu ogaadey 'filename.xls,' laakiin Microsoft Office Excel wuxuu awooday inuu furo feylka asagoo sameynaya dayactirka hoos ku qoran. Keydso faylka si dayactiradani u noqdaan kuwa joogto ah.
meesha filename.xls ay tahay musuqmaasuqa faylka XLS ee la hagaajinayo.
Natiijada dayactirka ayaa lagu qori doonaa hoos fariinta.
Ka dib markaad gujiso badhanka "Close", Excel wuxuu furi doonaa faylka go'an. Si kastaba ha noqotee, xog badan ayaa ah lost ka dib habka dayactirka / soo kabashada.
Marka feylkaaga Excel uu kharribmo oo qaybo ka mid ah Excel aan la aqoonsan karin, markaa Excel ayaa soo sheegi doonta farriintan khaladka ah waxayna isku dayi doontaa inay hagaajiso. Si kastaba ha noqotee, awoodeeda soo kabashada xaddidan ee Excel, ka dib habka dayactirka / soo kabashada, ma jirto xog dhab ah oo la soo kaban doono ama xog badan ayaa noqon doonta lost.
Waxaad isticmaali kartaa DataNumen Excel Repair inuu ka soo kabto faylka Excel ee musuqmaasuqa ah, kaas oo ka soo kaban doona xog badan oo ka badan Excel.
Muunada Faylka 1:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad4.xlsx
Iyada oo hawsha dayactirka ee Excel ku jirto, Excel ayaa ku guuldareysatay inay hagaajiso feylka.
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 100% xogta waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad4_fixed.xls
Muunada Faylka 2:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad3_1.xlsx
Iyada oo shaqada dayactirka ee Excel ay ku jirto, 0% xogta unugyada waa la soo ceshan karaa.
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 61% xogta waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad3_1_fixed.xls
Muunada Faylka 3:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad3_2.xlsx
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 36% xogta waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad3_2_fixed.xls
Muunada Faylka 4:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad3_4.xlsx
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 16.7% xogta waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad3_4_fixed.xls
Muunada Faylka 5:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad3_5.xlsx
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 95% xogta waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad3_5_fixed.xls
Muunada Faylka 6:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad3_7.xlsx
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 5% xogta waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad3_7_fixed.xls
Muunada Faylka 7:
Musuqmaasuqa XLSX file: Cillad2_1.xlsx
Iyada oo shaqada dayactirka ee Excel ay ku jirto, 50% xogta unugyada waa la soo ceshan karaa.
Iyadoo DataNumen Excel Repair: 89% xogta unugyada waa la soo ceshan karaa.
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad2_1_fixed.xls
Muunada Faylka 8:
Faylka XLS musuqmaasuq: Cillad2_2.xls
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Excel Repair: Cillad2_2_fixed.xlsx